Posted by Cameron at 15:58 No comments:
ရာသီဥတုကမှုန်မှိုင်းအေးစက်လို့ နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာ မီးခိုးရောင် မြူခိုးတွေထနေတယ်....။ ကိုယ့်ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာတော့ မြက်ပင်ရှည်တွေက ကိုယ့်အရပ်နဲ့ရွယ်တူ တချို့အပင်ဆို ကိုယ်ထက်တောင်ရှည်နေသေးတယ်....။ လေအေးတချက်ဝှေ့လိုက်တိုင်း နှင်းစက်မှုန်တွေက ကိုယ့်ပါးပြင်ကို စူးခနဲလာထိမှန်ကြတယ်...။ ဒီလိုအရောင်အဆင်း ဒီလိုအေးစိမ့်မှု ဒီလိုနေရာလေးကိုရောက်လာခဲ့တာ ဟိုး....အရင်ငယ်စဉ်တုန်းက အချိန်ကို ပြန်ပြီး အမှတ်ရစေတယ်...။ အဲဒီတုန်းက ဆောင်းရာသီနှင်းတွေပိန်းပိတ်နေအောင်ကျတုန်းက... ဒီလိုမီးခိုးရောင်မှိန်မှိန်တွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူလှတယ်...။
ဂါဝန်ရှည်ရှည်ဖါးဖါးနဲ့ အနွေးထည်ခပ်ပါးပါးတစ်ထည်တည်းဝတ်ပြီး ခေါင်းကိုပဝါခြုံထားရင်း လမ်းတလျှောက် နှင်းမှုန်တွေနဲ့ တံမြက်စည်းပင်ဖျားတွေက လေတိုက်တိုင်း ကိုယ့်ကိုလာကလူကျီစယ်နေကြတယ်....။ တံမြက်စည်းပွင့်တွေက ငွေမှင်ရောင်နဲ့ ပန်းဖျော့ဖျော့စပ်ထားတဲ့အရောင်နဲ့ သိပ်ကိုလှနေတယ်.......။ ကိုယ်က အဲအရောင်မျိုးသိပ်ကြိုက်တာ...။ ခုကိုယ်ဝတ်ထားတဲ့ ချည်ဂါဝန်လေးနဲ့မသိမ်းမယိမ်းပဲ...။ ကောင်းကင်ကိုမော့ ကြည့်တော့လည်း နှင်းတွေအရမ်းကျနေလို့လား တိမ်တွေကိုလည်းမမြင်ရဘူး...။ တခါတခါ နှင်းပွင့်လေးတေွ လက်ခနဲ လက်ခနဲအရောင်ကို မြင်နေရသလိုလို...။ ကိုယ်စီးထားတဲ့ ပိတ်ဖိနပ်အပါးလေးနဲ့ ဂါဝန်အနားစတွေက နှင်းတွေနဲ့ စိုထိုင်းစပြုနေပြီ...။ ကိုယ်ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ ဘယ်ကတည်းက ခရီးနှင်ခဲ့သလဲ...?? ဟင့်အင်း ကိုယ်မမှတ်မိတော့ဘူး ...ပြီးတော့ အခု ကိုယ်ဘယ်ကိုသွားနေသလဲ...?
ဟော.... ရှေ့နားနာ ရေစီးသံတွေ တဝေါဝေါကြားနေရပြီ.....။ ဂါဝန်လေးမပြီး ကိုယ်ပြေးသွားကြည့်လိုက်တော့ချောက်ကပါးကြီးရဲ့ ဟိုး....အောက်ဖက်မှာ ရေတွေစီးနေလိုက်တာ ဖွေးလက်လို့....။ စောစောက အသံကြားရုံနဲ့တင် ရေစီးဘယ်လောက်သန်မလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းမိပေမယ့် တကယ်မြင်လိုက်ရချိန်မှာ ပိုပြီးတော့ သေချာသွာတယ်...။ ဒါ ချောင်းတစ်ခုလား ....? မဖြစ်နိုင်ဘူး ပေသုံးဆယ်အကျယ်လောက်ရှိပေမယ့် ဒီလိုရေစီးမျိုးနဲ့တော့ မြစ်ပဲဖြစ်မှာပါ....။ တစ်ဖက်ကမ်းကိုလှမ်းကြည့်တော့ လူတစ်ရပ်စာလောက်ရှည်တဲ့ မြက်ပင်တွေက စိမ်းစိုလို့ ...။ မြက်ပင်ရှည်တွေကြားထဲမှာလည်း ဘာပန်းမှန်းမသိတဲ့ အဝါရောင်ပန်းပွင့်သေးသေးလေးတွေ ကြိုကြားကြိုကြားပွင့်နေကြတယ်....။ ခုမှ ကိုယ်သတိထားမိတယ်...ရေခဲမြစ်ရဲ့ ဟိုမှာဖက်ကမ်း မျက်စိတဆုံးက မြက်ပင်ရှည်စိမ်းစိမ်းနဲ့ အဝါရောင်ပန်းပွင့်တွေချည်းပဲ...။ ကိုယ့်ရပ်နေတဲ့ ဖက်ကမ်းမှာကျတော့ ငွေမှင်ရောင်ဖျော့လေးတွေနဲ့ လှုပ်ရမ်းနေတဲ့ တံမြက်စည်းပင်ရှည်တွေ...။ ပြီးတော့ ဟိုး..... မိုးပေါ်ကနေသာ စီးကြည့်မယ်ဆိုရင် ငွေမှင်ရောင်မျဉ်းနဲ့ အစိမ်းရောင်မျဉ်းနှစ်ခုကြားမှာ စီးဆင်နေတဲ့ မြစ်ရေဖွေးဖွေးတွေအဖြစ် မြင်ရမှာ....သိပ်ကိုလှနေမှာပဲလို့ ကိုယ် မျက်စိမှိတ်ပြီး စိတ်ကူးမြင်ယောင်ကြည့်မိနေသေးတယ်...။
လေကြမ်းတချက်တိုးလိုက်ချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်က ခြုံပဝါအဖြူလေး လေနဲ့အတူလွင့်သွားတယ်...။ ကိုယ်လိုက်ဖမ်းလို့မမှီလိုက်ဘူး....။ သူက လေအရှိန်နဲ့ တဖက်ကမ်းက မြက်ပင်စိမ်းဆီကို လွင့်သွားနေတယ်...။ ပဝါလေးကို ကိုယ်မမှိတ်မတုန်ကြည့်နေချိန်မှာပဲ ပဝါလေးဟာ မြက်ပင်အစိမ်းကြားတွေထဲက ဘယ်ချိန်က ပေါ်လာမှန်းမသိတဲ့ အဖြူရောင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်ကို အုပ်မိုးကျသွားခဲ့တယ်...။ မဟုတ်ဘူး... ပဝါလေးက ဖမ်းဆုပ်ခံလိုက်ရတာပါ....လှုရှားမှုကြောင့် အဖြူရောင်ဟာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ သက်ရှိလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပါ...။ ကိုယ်ကလိုက်ကြည့်လိုက် မြူခိုးတိုက်တွေက ကိုယ့်မြင်ကွင်းကိုကွယ်သွားလိုက်နဲ့ အဖြူရောင်ဟာ ကိုယ့်ပဝါကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ခပ်စိမ်းစိမ်းပြန်လှမ်းကြည့်နေတယ်လို့ သေချာမသဲကွဲပေမယ့်... ကိုယ်ခံစားမိနေတယ်...။ ခဏနေတော့ မြင်ကွင်းတွေ ပြန်ကြည်လင်လာတယ်....။ အိုး.... သူ....သူက... ကိုယ့်ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အိန်ဂျယ်ပဲ...။ ဟုတ်ပြီ ကိုယ်မှတ်မိပြီ... ဒီခရီးကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အိန်ဂျယ်ကို ရှာပုံတော်ထွက်လာခဲ့တာပဲ...။ ကိုယ်တချက်ပြုံးပြပြီး သူ့ကို လက်ဝေ့ရမ်းပြလိုက်တယ်.....။ ကိုယ့်အပြုံးတွေ ဖျော့တော့နေမလား ဒါပေမယ့် သူခံစားသိရှိနိုင်မှာပါ....။
သူကတော့ ကိုယ့်ကိုမသိတဲ့ သူတစ်ယောက်လို ခပ်စိမ်းစိမ်း ကြည့်မြဲ ကြည့်နေဆဲပါပဲ....။ ကိုယ်လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်ကို အုပ်ပြီး "အိန်ဂျယ်...ရေ" လို့ ခေါ်လိုက်တယ်....။ ကိုယ့်အသံတွေ လည်ချောင်းထဲကနေတောင် ထွက်မလာကြဘူး....။ ထိတ်လန့်တကြားနဲ့ ကိုယ်နှုတ်ခမ်းပေါ်ကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ အုပ်လိုက်မိတယ်....။ ဘုရားရေ.... ကိုယ့်အသံတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်လဲ...။ ကိုယ်ကြိုးစားပြီး ထပ်ခေါ်ကြည့်တယ်.....။ နိုး....အသံတွေက ထွက်မလာပြန်ဘူး...။ ပါးပြင်ပေါ်နွေးခနဲ မျက်ရည်တွေစီးကျလာကြတယ်...။ ကိုယ်လှမ်းကြည့်နေဆဲမှာပဲ အိန်ဂျယ်ဟာ ပဝါအဖြူနဲ့အတူ မြက်ပင်ရှည်ကြားကနေ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်...။ ဟိုဖက်ကမ်းကို ကိုယ်ဘယ်လိုကူးရမလဲ... တံတားများရှိမလားလို့ ကိုယ်အမောတကောလိုက်ရှာကြည့်တယ်...ဘာတံတားမှမရှိဘူး ဘာနွယ်ကြိုးမျှင်မှလည်းမတွေ့ရဘူး...။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လား တဖြေးဖြေး အသက်ရှူရတာကြပ်လာတယ်...။ အာခေါင်တွေလည်းခြောက်လာတယ်...။ ပြီးတော့ လောကကြီးတစ်ခုလုံး အမှောင်ထုတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်....။
အရင်ပို့စ်တုန်းက ကော်မန့်လေးတွေကို ဖတ်စေချင်လို့ တင်ပေးလိုက်တယ်...:)
၁) လင်းခေတ်ဒီနို (27.3.2011)
မှတ်ချက်။ ။ အနော် တစ် တစ် တစ်... :)))
၃) SHWE ZIN OO (27.3.2011)
၄) အဖြူရောင်နတ်သမီး (28.3.2011)
စာသားနုနုလေးတွေကို ခံစားချက်နုနုလေးနဲ့ နုနုရွရွလေးအားပေးသွားပါတယ်... မမိုးရေ...။
တကယ့်ကို စာအနုအလှလေး... ဖတ်ပြီး လွမ်းသလိုလို...
Posted by Cameron at 20:21 No comments:
ကျွန်မကို ကဗျာလေးတွေဖန်တီးတတ်လာအောင် ခံစားမှုတွေိကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက် ဒီကဗျာလေးရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်....။ ဒါကြောင့်သူ့ကို "ကဗျာလူ"လို့တင်စားလိုက်တာပါ...။ ပြီတော့ မိုးငွေ့ရဲ့အိန်ဂျယ်အကြိုက်ဆုံး ကဗျာတစ်ပုဒ်လဲဖြစ်ပါတယ်...။ ဒီကဗျာလေးဖြစ်လာဖို့အတွက်...ကျွန်မရဲ့ ကဗျာကြမ်းကို ညလင်းအိမ်က စကာလုံးလှလှတွေနဲ့ ကူညီစီခြယ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
အရင်ပို့စ်မှာတုန်းက သူတို့တွေပေးခဲ့တဲ့ ကော်မန့်တွေကို အမှတ်တရပြန်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်...။
၁. ညလင်းအိမ် said..(18.10.2010)
၂. blackrose said... (18.10.2010)
ကဗျာလူဆိုတဲ့ စာသားလေးသဘောကျတယ် မကြီးမိုးငွေ့
၃. အနှိုင်းမဲ့ said...(18.10.2010)
အဲဒီလိုဖန်ဆင်းပေးနိုင်တဲ့လူကို အချစ်လို့ခေါ်နိုင်သလား ငါ့အမ
၄. မြတ်မွန် said...(18.10.2010)
တော်လိုက်ကြတဲ့ ကဗျာဆရာတွေ ဂွတ်၏
၅. မိုးယံ...said ... (19.10.2010)
သူ့လူကတမျိုးပဲနော် ဘာတဲ့ ကဗျာလူဆိုလား...။ ရေးတတ်တဲ့သူများကြတော့လဲ သူ့နှလုံးသားက ဖွင့်ဟတဲ့ စာတွေအလား ဖတ်ရသူဘဝင်ခိုက်စေ၏
၆. ကြယ်လွမ်းသူ... said (19.10.2010)
အစ်မရေ ကဗျာဆိုတာ စကားလုံးတွေနဲ့ ဖွဲ့သီထားတဲ့ ခံစားချက်အစုအဝေးကြီးပေါ့နော်.. ကဗျာလိုလူကို ခံစားသွားပါတယ်...။ လင့်ပါယူသွားတယ်နော်..
Posted by Cameron at 09:58 No comments:
Posted by Cameron at 21:45 No comments:
အဲလိုဘာမှမဟုတ်သွားစပ်စုပြီးကြည့်လိုက်တာ ညနေတော်တော်မိုးချုပ်မှ အိမ်ပြန်နောက်ကျလို့ ဖေဖေကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက်တာခံခဲ့ရတယ်...။ ဖေဖေက ကျွန်မကို သိပ်ချစ်တာ ခုလိုတခါမှတောင်ရိုက်ဖူးတာမဟုတ်ဘူး...။ ဆူတာလောက်ပဲရှိခဲ့တာ..။ အဲဒီနေ့ ဖေဖေ မေမေနဲ့ရန်ဖြစ်ကြလို့ ကျွန်မကိုမဲလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်...။ မေမေကျွန်မကိုမွေးပြီး ခြောက်နှစ်လောက်ကျမှ မောင်လေးကိုမွေးတောဆိုတော့ ကျွန်မက ခြောက်နှစ်လောက် တစ်ဦးတည်းသောသမီးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့....။
ကျွန်မအရွယ်ရောက်စ မှတ်မိသလောက်တော့ ဖေဖေနဲ့မေမေက တကျက်ကျက်ပဲ...။ ဖေဖေက ကျွန်မနှစ်နှစ်သမီးအထိ မော်လမြိုင်စစ်တပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်...။ စစ်ထဲကထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက ဖိုးဖိုးပြန်ခေါ်လို့ပါပဲ...။ မိသားစုနဲ့ ဟိုးအဝေးမှာ သွားမနေရအောင်တဲ့...။ ဖိုးဖိုးက သူ့သမက် ဖေဖေ့ကို အိမ်မှာပဲ စီးပွားရေးလုပ်စေချင်ခဲ့တာ..။ ဖေဖေကလဲ စစ်ထဲကထွက်ပြီး စစ်မှုထမ်းဟောင်းအရက်ဆိုင်မှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်...။ အရက်ဆိုင်မှာလုပ်တော့ အသောက်အစားမကင်းတော့ဘူးလေ...။ အဲဒါကြောင့်မေမေနဲ့မကြာခဏရန်ဖြစ်ကြတာ...။ ပြီးတော့ဖေဖေဟာ အပေါင်းအသင်းမှားခဲ့လို့ အသက်ဆုံးတဲ့အထိ အပြောင်းအလဲတွေများခဲ့တယ်...။
ညနေဖက် ကျွန်မတို့အိမ်မှာ ဗီဒီယိုပြတဲ့ချိန်ဆို ဖေဖေရောက်လာတတ်တယ်...။ "သမီးလေး ဖေဖေ့ဆီလာပါဦးလို့" ဖေဖေက လက်နှစ်ဖက်ဆန့်ပြီးခေါ်ရင် ကျွန်မက နောက်ကိုတွန့်ဆုတ်ပြီး ဖေဖေ့ဆီမသွားရဲခဲ့ဘူး...။ ကျွန်မအောက်က မောင်လေးကျတော့ တွက်တယ် လူမကြောက်တတ်ဘူး..။ ဖေဖေဆီသူလိုက်ရဲတယ်...။ ဖေဖေသူ့ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ ရွာတစ်ပတ်ပတ်ပြီး တင်စီးလဲ သူလိုက်ရဲတယ်...။ ဖိုးဖိုးကတော့ မေမေ့ကို ဖေဖေနဲ့ပြန်ပေါင်းဖို့ ဖြောင်းဖြပေမယ့် ခေါင်းမာတဲ့ မေမေကတော့ လုံးပြန်လက်မခံခဲ့ဘူး...။ ဖေဖေကျန်းမာရေး တစစဆိုးရွားလာခဲ့ရာက နောက်ဆုံးဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်....။ ဖိုးဖိုးပဲ အစစအရာရာ တာဝန်ယူပေးတယ်...။ ဖေဖေ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ဖေဖေချစ်တဲ့ သမီးလေးကအနားမှာရှိမနေခဲ့ဘူး...။ အဖေသေတာတောင်မသွားတဲ့ သမီးလေးဆိုပြီး တရွာလုံးက ဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့တာကိုခံခဲ့ရတယ်...။ ကျွန်မကို စိတ်မာလို့ သံယောဇဉ်မရှိလို့ စိမ်းပျက်ရက်စက်နိုင်လို့ လို့အမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်တွေပေးကြခဲ့လိမ့်မယ်...။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျွန်မက ကြောက်တဲ့စိတ် ဖေဖေ့အပေါ်စိမ်းတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့မသွားခဲ့တာ...။ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မလည်း လူကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကို အသက်အရွယ်တော်တော်ရတဲ့အထိ ကြိုးစားဖျောက်ယူခဲ့ရတယ်...။ ကျွန်မဘ၀မှာ ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ နောင်တထပ်မရချင်တော့ဘူး...။ လောကမှာ တကြိမ်တခါပဲ ရတတ်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ရယူတတ်ဖို့ ကျွန်မ အဲဒီတုန်းက နားမလည်ခဲ့ဘူး...။ ဖေဖေဆုံးခါနီး အမြင်အာရုံ အကြားအာရုံတွေတစ်ခုမှမကောင်းတော့ဘူး ...။ ဖေဖေသိပ်....ကို သနားစရာကောင်းပါတယ်...။ မောင်လေးကတော့ ဖေဖေအသက်ထွက်သွားတဲ့အထိ အနားမှာရှိနေခဲ့တယ်...သူ အဲတုန်းက အသက်ခြောက်နှစ်ထဲရယ်...။ ကျွန်မထက်စာရင် မောင်လေးကမှ ဖေဖေအလိုကိုဖြည့်နိုင်ခဲ့သေးတယ်....။
ဖေဖေ့အသုဘကို ဖိုးဖိုးပဲအကုန်စီစဉ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်...။ ဖေဖေဆုံးတာ ကျွန်မ မျက်ရည်လေးတစ်စက်တောင်မကျခဲ့ဘူး...။ တကယ်တော့ ကျွန်မငိုနေခဲ့ပါတယ်... ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တဲ့ မျက်ရည်တွေ ခုချိန်ထိကျနေတုန်းပဲ...။ အနှစ်သုံးဆယ်ကျော်... ဆုံးပါးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဖေဖေ့ကို သတိရလွမ်းဆွတ်သောအားဖြင့် ဒီပို့စ်ကို မိုးငွေ့ရဲ့ဆယ်တစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည် အမှတ်တရ အဖြစ် ပြန်လည်ရေးသားဖော်ပြ​ြခင်းဖြစ်ပါတယ်...။ ဖေဖေ ကောင်းရာသုဂတိဘုံ ရောက်ရှိပါစေ...။
Posted by Cameron at 23:58 No comments:
ဘာမှမပြောခင် ဒီရုပ်ရှင်အရမ်းကောင်းတယ် လူတိုင်းကြည့်သင့်တယ်လို့ ပြောပါရစေ..... :)
သတိထားမိသလောက် Movie Review ရေးတဲ့သူတိုင်း ဇာတ်လမ်းကို spoil မလုပ်ဘဲ ဘယ်လိုကောင်းကြောင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းသူတွေချည်းပဲတွေ့ရတာ ထူးခြားချက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာက ကျွန်မတို့ မြန်မာဇာတ်ကားကို ဒီလို အရည်အသွေးမျိုး ဒီလိုရိုက်ချက်မျိုး ဒီလိုဇာတ်ညွှန်းမျိုးနဲ့ အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံတဲ့ စေတနာပါတဲ့ ဇာတ်ကားမျိုး ငတ်မွတ်နေခဲ့တာ ကြာခဲ့ပြီဆိုတာပဲ....၊
ဘဘဦးသုခတို့ ဦးသာဓုတို့ ဦးဝင်းဦးတို့ ခေတ်ကလို အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခု ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကျော်လွန်မှ တဖန်ပြန်ကြည့်ရတာမျိုးကိုး....။ သိပ်ကောင်းတယ် အရင်ဦးဆုံး ဒါရိုက်တာခရစ်တီးနားခီကို တကယ်ချီးကျူး ဂုဏ်ယူမိပါတယ်...။ ပြီးတော့ ဇဏ်ခီ ဇာတ်ညွှန်းပိုင်းနဲ့ တေးဂီတပိုင်း သိပ်ပိုင်တယ်...။ ဒီကားလေးမှာ သီချင်းကအသက်ဆိုလည်း ဟုတ်တယ်....။ ဇာတ်ကားရဲ့ OST စီတီတွေပါ ရောင်းနေပြီလို့သိရတယ်...။ ဝယ်သိမ်းပြီး နားထောင်ရမယ်လေ...။
ဇာတ်ကားလေးက ရသပေါင်းစုံပေးစွမ်းတယ်...ပေးတဲ့ရသတိုင်းကလည်း အနှစ်တွေချည်းပဲ...ရုံထဲမှာ ကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံး ကားပြီးတဲ့အထိ ဆိတ်ငြိမ်နေကြတာ ခါတိုင်းကားတွေလို နေကြာစေ့ကိုက်သံ အာလူးကြော်ဝါးသံတွေတောင် မကြားရဘဲ အားလုံးက ဇာတ်ကားထဲစိတ်နှစ်နေကြတာ...။ ရုပ်ရှင်လဲပြီးတေရာ အကုန်လုံးနီးပါး မျက်လုံးတွေမို့အစ် နီရဲ ငိုထားကြတာ....တကယ်ပြောတာ တစ်ရှူးနှစ်ရွက်နဲ့မလောက်ဘူး...။ကျွန်မဆိုပိုဆိုးသေးတယ် ငယ်တုန်းကတည်းက အိမ်မှာဗီဒီယိုရုံရှေ့ဆုံးကလေးတန်းမှာ ဝမ်းနည်းရမယ့်ခန်းဆို ရုပ်ရှင်ထဲကမျက်ရည်မကျသေးဘူး ကိုယ်ကအရင်ငိုနေနှင့်ပြီ....။ ဆိုတော့ ဒီကားမှာလည်း ကျွန်မ တစ်ရှူးမလောက်ခဲ့ဘူးဆိုပါတော့....။
မင်းသားနဲ့မင်းသမီး သရုပ်ဆောင်တာ သိပ်သဘာဝကျတယ်...။ သရုပ်ဆောင်နေတာနဲ့မတူဘဲ တကယ်ဖြစ်နေတာမျိုး လုပ်ပြနိုင်ကြတာ သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို မျက်ဝါးထင်ထင်ပြလိုက်တာပါပဲ...။ နောက်ထပ်အခေါက်ခေါက်အခါခါ ကြည့်ဖို့တောင် မရိုးအီနိုင်မယ့်ဇာတ်ကားမျိုးပါပဲ....။
Good job!!!! NOW & EVER TEAM... I am very proud of you all....
နှစ်ပတ်လည် ပို့စ်တွေကို နှစ်လဆက်တိုက်တင်မယ်လုပ်နေတဲ့ကြားထဲက ဒီပို့စ်လေးကို နေနိုင်မထိုင်နိုင်ကြားဖြတ်တင်ပါရစေ...:)
Posted by Cameron at 10:04 No comments:
ဘယ်သူဓါတ်ပုံရိုက်တာမှမခံလို့ ဖေဖေကိုယ်တိုင်ရိုက်ပေးတော့မှ အဲလိုပဲလေးထုတ်ပြီးအရိုက်ခံ
ကျွန်မကိုစမွေးတော့ မေမေတို့မောင်နှမတွေအတွက် တူမဦးလေးဖြစ်ခဲ့သလို အဖိုးအဖွားတွေအတွက်လဲ မြေးဦးလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်....။ မြေဦးတို့ထုံးစံအတိုင်း တစ်အိမ်လုံးဝိုင်းချစ်တာခံရတာပေါ့...။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးမို့ ဖေဖေကိုယ်တိုင် "မီးမီး"လို့ အိမ်နာမည်လေးပေးခဲ့တယ်...။ မေမေဆိုရင် ကျွန်မကိုမွေးပြီးကတည်းက သိပ်မထိန်းလိုက်ရဘူးလို့ပြောတယ်....။ မေမေ့ညီမအငယ်ဆုံးတွေဖြစ်တဲ့ အဒေါ်အမွှာနှစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်မ ဆယ်နှစ်တိတိကွာပါတယ်...။ ကျွန်မကို မွေးတော့ အိမ်မှာပဲမွေးပါတယ်...။ အဲဒီနေ့က အမွှာအဒေါ်တွေက စာမေးပွဲဖြေမယ့်ရက်ကို ကျောင်းရောက်ပြီး ကလေးလေးကို စာမေးပွဲခန်းမဝင်ခင်ပြန်ပြေးလာကြည့်ကြသေးတယ်တဲ့....။
မီးမီးရဲ့ ရှူရှူးပေါက် အီအီးပါထားတဲ့ အနှီးဝတ်တွေကိုလည်း လုလျှောကြရတာမောဆိုပဲ...။ ညဖက် နို့ဗူးထဖျော်ကြတာလည်း သူတို့ပဲတဲ့...။ ဒီတော့ မီးမီးမွေးဖွားလာခြင်းဟာ သူတို့တွေအတွက် ကစားစရာအရုပ်တစ်ရုပ်ရလိုက်သလိုပါပဲ...။‌ နေ့ညလုပြီးတော့တောင်ထိန်းပေးကြတယ်...။ ဒီတော့ အဲဒီအဒေါ်တွေ ဘယ်သွားသွား မီးမီးမပါတဲ့ နေရာမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်...။ တခါက အဖိုးဆန်စက်ရှိတဲ့ မြေနီတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုမှာ မီးမီးကို စက်ဘီးနဲ့တင်နင်းပြီးလဲကျလို့ စက်ဘီးလက်ကိုင်နဲ့ မီးမီးရင်ဘတ်စောင့်မိလို့ မျက်ဖြူလန်ပြီး အသက်ရှူမရတော့လို့ နှစ်ယောက်သားကလေးကိုချီပြီး လှုပ်ခါရမ်းလိုက်တော့မှ ငိုသံထွက်လာတော့မှ သက်မချနိုင်တော့တာတဲ့...။ ကြည့်ဦးတော်သေးတာပေါ့ သူတို့က အသက်ကယ်နည်းလေး သိနေပေလို့...။ နို့မို့ဆို မီးမီးဆိုတာ ခု မိုးငွေ့လည်းဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူး...။
ကျွန်မကိုမွေးပေးခဲ့တဲ့ နပ်စ်မက ရှမ်းလူမျိုး ဆရာမဒေါ်နန်းဖေါင်းတဲ့... သူ့အမျိုးသားက ကျွန်မကျောင်းနေတော့ ကျွန်မတို့ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဖြစ်လာတဲ့ ဆရာကြီး ဦးဆမ်မြူရယ်...။ ဆရာကြီးက လားဟူလူမျိုး သူတို့မှာ သမီးသုံးယောက်ရှိတယ်...။ တစ်အိမ်လုံး ကျွန်မကိုချစ်ကြတယ်...။ ကျွန်မ နာမည် မီးမီးကိုတောင် သူတို့က လားဟူလို "အားမီ"လို့ခေါ်ကြတာခုချိန်ထိပဲ....။
အရင်ပို့စ်အဟောင်းတုန်းက ကော်မန့်ပေးခဲ့တာတွေကို အမှတ်တရပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..
၁. အဖြူရောင်နတ်သမီး said...(9.1.2010)
"မီးမီးလေး" က ချစ်စရာလေးတော့
လာပါအုံး အန်တီနတ်သမီးလေးနားကို... အန်တီ့ကိုချစ်လား...
အန်တီနတ်သမီးလည်း "မီးမီးလေး"ကိုအရမ်းချစ်ပါတယ်တဲ့ရှင်... အာဘွား...
၂. အနှိုင်းမဲ့ said...(10.1.2010)
ဟယ်...ချစ်လိုက်တာ... အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးလေးပဲနော်...
၃. မိုးစက်အိမ် said...(11.1.2010)
မီးမီးဆိုတဲ့နာမည်က တော်တော်များများသုံးတယ်ထင်ပါတယ်...ဒီမီးမီးငယ်ငယ်ကပုံကလည်း မိုးစက်အိမ် ပိစိကွေးတုန်းကလောက်လည်း မချောဘူး ဟတ်...ရန်စသွားတာပါ အမရေ...:P
၄. ဏီလင်းညို said...(12.1.2010)
မမိုးရေ... ငယ်ငယ်တုန်းက အားလုံးဝိုင်းချစ်ကြတယ်ဆိုတာ သေချာမယ်.. ပုံထဲက ကလေးလေးက ချစ်စရာလေးလေ ခါးလေးကိုထောက်လို့
၅. Khin Oo May said...(31.7.2010)
၆. နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) said...(9.1.2014)
ပုံကိုက ဆွဲလိမ်ပြစ်ချင်စရာ :)
၇. မောင်ဘကြိုင် (ချဉ်ပေါင်ခြံ) said...(1.10.2016)
ကျွန်တော့်သမီးကိုလည်း မီးမီးချောလို့ခေါ်တာ မမီးကိုအားကျလို့ :) ;)
Posted by Cameron at 12:21 No comments: